जीवनको रंग नाम राख्न नजान्नेको नालीबेली एक सातामै तीनवटा चलचित्र रिलिज हुनु नौलो भएन । विषयवस्तु र नामै अंग्रेजी र हिन्दीबाट कपी पेस्ट हुन थालेको छ । सायद निर्माताहरूले नेपाली शब्दकोश पल्टाउन नजानेर होला हाई�वे, एटिएम, मायाज वार, हेलो प्रकृति, माई ब्रदर, सो सिम्पल, फेसबुक, लभ इज लाइफ, भिजा गर्ल, जंगल क्विन, बडिगार्ड, फुलस्टप, फोर्सलगायतको अंग्रेजी नामको चलचित्र धमाधम बनिरहेका छन् । के नेपाली नामहरू नै नभएका हुन् ? अझ पछिल्ला दिनमा निर्माताहरूले आ�नो यौनकुण्ठालाई चलचित्रमा प्रस्तुत गरेका छन् । डान्सवार र रेस्टुरेन्टमा नाच्नेहरूलाई हिरोइन बनाइएको छ । अलि ठूलो पाखुरा हु�दैमा हिरो बन्न पाउने, जो पनि स्क्रिप्ट राइटर बन्ने, छाडा फिल्म बनाउने र उल्टै दर्शकले हेरेनन् भनेर गाली गर्ने यस्ता निर्माता निर्देशकहरूबाट चलचित्र क्षेत्रले कस्तो आशा गर्ने ?
निजी बोर्डिङ स्कुलको रोग अहिले चलचित्र क्षेत्रमा सरेको छ । आफन्त र नातागोताले नै भरिएको चलचित्र �सो सिम्पल� आउने भएको छ । केशव भट्टराईद्वारा निर्मित सो चलचित्रका निर्र्देशक शिव रेग्मी हुन् । नायिका भने उनै रेग्मीकी छोेरी भावनालाई बनाइएको छ । प्रदीप भारद्वाज यस चलचित्रका स्क्रिप्ट राइटर हुन् । उनकै भाइ प्रमोदलाई नायक बनाइएको यस चलचित्रमाथि अहिले अनेक टिप्पणी हुन थालेका छन् । उता, हिन्दी चलचित्र �इक था टाइगर�ले करोडौ� रूपैया� नेपालबाट लिएर जा�दा नेपाली चलचित्र बिन्दासले तीन दिनमा ३८ लाखको व्यापार ग�यो । कमालै भयो भन्दै चलचित्रका निर्माता राजु गिरीले अन्तर्वार्ता दि�दा अन्य निर्माता�निर्देशकले उनलाई गफाडीको संज्ञा दिए । काम एउटाको, कुरा अर्काको, विश्वास कसको गर्ने ?
सम्बन्धका अनेकन सिलसिला
झगडाको बीज कत्रो नै हुन्छ र ? सानै कारणले पनि मन दुखाएर चलचित्र उद्योगमा पानी बाराबार गर्नेको संख्या प्रतिदिन बढ्दै छ । आर्यन सिग्देल र निशा अधिकारीबीचको सम्बन्धमा मिठास छैन ।
उसो निशा त चलचित्र क्षेत्रमा सम्बन्ध राख्दै र चा�डो�चा�डो सम्बन्ध बिगार्नेमा कहलिएकी छन् । उद्धव पौड्यालका छोरा निरकस�ग विवाह गर्ने भनी आफै�ले प्रचार गरिन् । तर, पौड्याल परिवारले निरकका लागि अर्कै केटी खोज्यो । सम्बन्धले तनावपूर्ण रूप लिने संकेत देखिएपछि पौड्याल परिवारकै पैसामा उनी अमेरिका घुम्न गइन् । र, फर्किंदा फिल्मसम्बन्धी अध्ययन गरेको गफ लगाइन् । अहिले निर्माता तथा वितरक सुनील मानन्धरस�ग उनको सम्बन्ध पनि त्यस्तै छ । सुनीलले डाइरेक्टर बनाउलान् भनी उनीस�ग प्रेमकै प्रस्ताव राखिन् । तर, उद्देश्य पूरा नभएपछि सम्बन्ध टुटेको छ । त्यस्तै, नायिका रेजिना उप्रेती र झरना थापाबीच पानी बाराबारको स्थिति छ । झरनाका पति सुनील र रेजिनाबीचको आपत्तिजनक व्यवहारका कारण उनीहरूको झगडा परेको थियो । उसो त, रेजिना पनि सम्बन्ध राख्दै�बिगार्दै हि�ड्नमा निशाजत्तिकै माहिर छिन् । सोभित बस्नेतस�ग उनको सम्बन्ध बन्नु र बिग्रनु छेपाराले रंग फेर्नुजस्तै मानिन्छ । निर्मात्री कविता श्रेष्ठस�ग पनि उनको राम्रै सम्बन्ध थियो । सुटिङका बेला क्याबिन गर्लको शैलीमा मदिरा पिएर केटाहरूस�ग हि�डेदेखि बिग्रिएको सम्बन्ध अहिले फेरि �ठिकै� रहेको चलचित्रकर्मी बताउ�छन् । दुलही रानीबाट चलचित्र उद्योगमा प्रवेश गरेकी नायिका सविना कार्की र जिया केसीबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको छ । अहिले यी दुवै नायिकाबीच बोलचालसम्म छैन । चलचित्र एटिएममा कथाले मागेजति दिएर चर्चामा आएकी सविनालाई जिया केसीले नै एटिएम चलचित्रका निर्माता�निर्देशकस�ग परिचय गराइदिएकी थिइन् । उनीहरूबीच कुनै ठूलो कारणले झगडा भएको होइन । एटिएम चलचित्रको एउटा दृश्यमा जिया केसीले सविनाको खुट्टामा कुल्चनुपर्ने दृश्य थियो उनले बेस्सरी कुल्चिन् । यही कारणले विवाद जन्मियो । विवाद बढ्दै जा�दा बोलचाल नै नहुने स्थिति आयो । चलचित्रमा नायक दिनेश थापाको संवेदनशील अंगमा समाएर चर्चामा आएकी नायिकाले अनलाइन पत्रिकास�ग भने आफूले नायकको सर्टको बटम मात्रै समातेको तर क्यामेराले नै बिगारेको आरोप लगाइन् ।